Nirefodrefotra indray ny basy teny Ambodivonkely: Jiolahy roa rotiky ny balan’ny polisy | NewsMada
Hatry ny omaly maraina no efa nanarahan’ny andiana polisy manokana miady amin’ny asan-jiolahy mahery vaika,ahitana ny Sag, ny UIR, … ity andian-jiolahy iray ity. Omaly hariva, velona ny fifampitifirana teo Ambodivonkely Anosivavaka. Maty voatifitra nandritra izany ny roa lahy tamin’ireo jiolahy.
Nihorohoro indray ny mponina teny Ambodivonkely Anosivavaka Ambohimanarina, omaly hariva. Toy ireny amin’ny horonan-tsarimihetsika ireny ny zava-nitranga teny an-toerana raha ny fitantaran’ireo olona nanatri-maso ny fifampitifirana teo amin’ny jiolahy sy ireo polisy miady amin’ny asan-jiolahy mahery vaika, nahitana ny Sag, ny UIR ary ny Usi. Lavo nandritra ny fifampitifirana ny jiolahy roa raindahiny niaraka tamin’ny basy PA. Araka ny fanazavan’ny polisy, efa hatry ny omaly maraina no efa nahazo loharanom-baovao momba ireto andian-jiolahy ireto ny polisy ary efa nanaraka azy ireo hatrany ny polisy nisaron-tava niaraka tamin’ny basy Kalachnikov, nanao fanamiana sivily. Nametraka ny paikady rehetra amin’ny ahafahana misambotra ireto jiolahy ireto ny polisy. Nisy ny fifanenjehana (hatrany an-tanimbary, araka ny filazan’ny olona teny an-toerana) ka niafara tamin’ny fifampitifirana izany ka nahalavo ny jiolahy roa. Nitondra fiara 4×4 iray sy moto ireo olon-dratsy. Feno diam-bala nandritra ny fifampitifirana ilay fiara. Nandriaka tao anaty fiara koa ny ran’ireo jiolahy satria tsy nanaiky lembenana fa nanohitra ireo polisy tamin’ny alalan’ny tifitra.
Nisy tafaporitsaka tamin’ny moto…
Nohamafisin’ny polisy hatrany fa tsy fantatra mazava aloha hatreto na andian-jiolahy nikasa haka an-keriny na mpanao fanafihana mitam-piadiana ry zalahy ireto. Ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny polisy no hahafantarana ny marina rehetra momba ireto andian-jiolahy ireto. Nisy jiolahy tafaporitsaka tamin’ny moto nandritra ity fifanjevoana ity. Voalaza fa efa fantapantatra ihany ny momba ireto tafaporitsaka ireto. Nanamafy hatrany ny polisy fa tafiditra ao anatin’ny ”Opération Force de frappe” izao hetsika ataon’ny polisy izao , manoloana ny asan-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika. Mendri-piderana ny ezaka vitan’ny polisim-pirenena manoloana ny ady amin’ny jiolahy mitam-piadiana.